Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား အများပြည်သူသဘောထား တောင်းခံခြင်း | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Published: Jul 05 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
၂။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် Public IP Address နှင့် Autonomous System (AS) Number များအား စိစစ်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ Domain Name Category များအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ Domain Name Category အလိုက် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများအား သတ်မှတ်ခြင်း၊ လျှောက်ထားရယူနိုင်ခြင်းမရှိသော Domain Name များအားသတ်မှတ်ခြင်း၊ အရံထားရှိသည့် Domain Name (Reserved Domain Name)များအား သတ်မှတ်ခြင်း၊ Registrant (Domain Name မှတ်ပုံတင်သူ) နှင့် Registrar (Domain Name များအား ရောင်းချခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်စာရင်းများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုဆောင်ရွက်သူ)များ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ Domain ရောင်းချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Registrar များမှ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ Domain များ အား မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ Electronic Addressing Plan အား ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပါသည်။
E-mail Address: dg.ptd@mptmail.net.mm, resource@ptd.gov.mm
Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) for Public Consultation.pdf
1. Introductory Comment.pdf
2. EAP Questions.pdf
3. Summary & Conclusion.pdf